Sebenzisa iMathethi ukuQinisekisa iNkokhelo efunekayo kwiNgxowa-mboleko
Ukufumana ityala kunye nokwenza uluhlu lweentlawulo zokunciphisa eli tyala ngaphandle kweyona nto into enokuyenza xa usaphila. Uninzi lwabantu luthengwa, njengendlu okanye i-auto, okuya kuyenzeka kuphela xa sinikwe ixesha elaneleyo lokuhlawula inani lemveliso.
Oku kubhekiselwa kuye njengokuhlawula amatyala, i-term ethatha ingcambu yayo kwigama lesiFrentshi elithi amortir, eliyinto yokubonelela ukufa kwinto ethile.
Iinkcazelo ezisisiseko ezifunekayo ukuba umntu aziqonde le ngcamango:
1. Inqununu - isixa sokuqala setyala, ngokuqhelekileyo intengo yento ethengiweyo.
Imali yeNzala - inani eliza kuhlawula ukusetyenziswa kwemali yomnye umntu. Ngokuqhelekileyo kubonakaliswe njengepesenti ukwenzela ukuba le mali ingabonakaliswa naliphi ixesha lexesha.
3. Ixesha - ngokukodwa inani eliza kuthathwa lokuhlawula (ukuphelisa) ityala. Ukubonakaliswa ngokuqhelekileyo kwiminyaka, kodwa iqondwa kakuhle njengenani lexesha lexesha leentlawulo, oko kukuthi, 36 iintlawulo zenyanga.
Ukubala okulula kwenzalo kulandela ifom: I = PRT, apho
I = Inzala
P = Inqununu
R = Intlawulo yeNzala
T = Ixesha.
Umzekelo Wokumisa amatyala
UJohn unquma ukuthenga imoto. Umthengisi unika ixabiso kwaye umxelele ukuba unokuhlawula ngexesha elide nje xa enza izitofu ezingama-36 kwaye uyavuma ukuhlawula inzala yesithandathu. (6%). Iinyaniso zi:
Ixabiso elivunyelweneyo le-18,000 kwimoto, irhafu ifakiwe.
Iminyaka emithathu okanye 36 iintlawulo ezilinganayo ukuhlawula ityala.
Intlawulo yokuqala iya kwenzeka iintsuku ezingama-30 emva kokufumana mboleko
Ukwenza lula lula ingxaki, siyazi oku kulandelayo:
1. Inkokhelo yenyanga nganye iya kubandakanya ubuncinane i-1/36 yeenqununu ukuze sikwazi ukuhlawula ityala loqobo.
2. Inkokhelo yenyanga nganye iya kubandakanya inxalenye yenzalo elingana ne-1/36 yomdla wonke.
3. Intlawulo yemali ibalwe ngokujonga kwinqanaba leemali ezahlukileyo kwizinga elenzelwe inzala.
Jonga ngolu shidi olubonisa imeko yethu mboleko.
Le tafile ibonisa ukubalwa komdla kwinyanga nganye, kubonisa ukuhla kwehla lokuhlawula ngenxa yenqununu ehlawula inyanga nganye (1/36 ye-balance balance at the first payment) kumzekelo wethu 18,090 / 36 = 502.50)
Ngokubala inani lemali kunye nokubala umyinge, unokufika kwisilinganiselo esilula senkokhelo efunekayo ukulungiswa kweli tyala. Ukulinganisa kuya kuhluka kwizinto ezichanekileyo kuba uhlawula ngaphantsi kwenani elibaliweyo lemali kwiintlawulo zangaphambili, eziza kutshintsha inani lemali ephumayo kwaye ngoko ke inani lemali elibalwe kwithuba elilandelayo.
Ukuqonda imiphumo elula yomdla kwimali ngokwexesha elinikeziweyo kunye nokuqaphela ukuba ukuchithwa kwemali ayikho nto ke isishwankathelo esilandelayo soluhlu lwezibalo zamatyala ezilula zenyanga kufuneka zinike umntu ithuba lokuqonda kangcono iimali-mboleko kunye nemali-mboleko. Izibalo zilula kwaye ziyinkimbinkimbi; Ukubala i-interest interest periodic elula kodwa ukufumana intlawulo ngokukhawuleza ukuhlawula ityala elincinci.
Iimpawu malunga neB-1B i-Lancer Bomber
Wisin & Yandel - I-Reggaeton 'iDuo De La Historia'
Amanqanaba angaphezulu okuTyala aSebenzayo
Imfazwe Yehlabathi II: I-Fleet Admiral Chester W. Nimitz
Ukuvakalisa Inzondelelo okanye Uvuyo